ओ अमीरा : दीपक बज्राचार्यको संगीत - यात्रा सन्दर्भ - साप्ताहिक
ओ अमीरा : दीपक बज्राचार्यको संगीत
दीपक बज्राचार्य लोकप्रिय संगीत साधक मात्र होइनन्, आफैंमा ट्रेन्ड हुन् । जतिबेला उनी स्कुल पढ्थे त्यतिबेलादेखि नै संगीतमा रमाउँथे । स्थानीय साथीभाइहरू गिल्ला गर्थे, ‘तिमीले गीत गाएर, गितार बजाएर खाँदैनौं ।’ दीपकको मनमा यो कुरा बिझ्थ्यो, तर जोसुकैले जेसुकै भनून्, उनले आफ्नो साधनालाई जारी राखे । एक दिन उनले थाहा पाए, उनी त लोकप्रिय भैसकेछन् ।
उनको गायन ट्रेन्ड सेटर भएछ । त्यसपछि दीपकले अहिलेसम्म पछाडि फर्केर हेरेका छैनन् । ‘ओ अमीरा’ उनको यस्तो सिर्जना हो जसको महत्व अत्यन्त धेरै छ उनको जीवनमा । जसको नाम अमीरामा उनले गीत गाए, ती अमीरा अहिले उनकी पत्नी हुन् । अमीरासँग दीपकको फोनमा कुरा गर्दागर्दै पहिचान बढ्यो । उनी लभी–डबीका रूपमा चिनिए । बिहे गरे । अहिले सुखमय दाम्पत्य जीवनको आनन्दमा रमाइरहेका छन् ।
अलिकति इन्ट्रोभर्ट छन् दीपक । उनी आफ्नी पत्नी अमीरा मात्र होइन, नेपालका महिला प्रतिभाहरूले संगीतमा लाग्ने प्रोत्साहन नपाएको स्पष्ट बताउँछन् । अमीराका बारेमा उनको विचार निकै भावनात्मक र सारपूर्ण छ । अमीरालाई मन पर्छ लिबर्टी । एकपटक दुवै बूढाबूढी अमेरिका भ्रमणमा थिए । न्युयोर्कमा दीपक र अमीरा एउटै कोठामा सुतिरहेका थिए । दीपक निदाए । त्यसपछि दुई बजे राति उनको निद्रा खुल्यो । अमीरा कोठामा थिइनन् । दीपकको नर्भसनेस बढ्यो । त्यत्तिकैमा अमीरा कोठामा आइन् । उनी स्वतन्त्रताको खोजीमा होटलछेउको पार्कमा गएकी थिइन् ।
फर्केर कोठामा आउँदा अमीरा जाज्वल्य थिइन् । खुसी र स्वतन्त्रताको अनूभूतिले रमाएकी । ‘म कुनै रितु होइन’ र ‘काली काली’ जस्ता गीत उनका अनुपम सिर्जना हुन् । ‘काली काली’ उनको यस्तो सर्वप्रिय सिर्जना हो जुन गीत नगाएसम्म उनको कुनै पनि कन्सर्ट टुंगिँदैन । युट्युबमा उनका गीतहरूको श्रृंखला भेटिन्छ । साँझ पूर्णिमा र औंसीको बीचमा मुन डान्स हेर्दै दीपकका गीत सुन्नुको मज्जा नै अर्को छ ।
दीपकले कुनै ब्यान्डमा काम गरेनन । अहिले उनको आफ्नै ब्यान्ड छ रिद्म, तर ब्यान्डमा रहेर काम नगरे पनि दीपक ब्यान्डवालाहरूका बीच लोकप्रिय छन् । भारतका लोकप्रिय गायक कन्सर्टका लागि काठमाडौं आउँदा उनले ओपनिङ पर्फमेन्स दिएका थिए । उनको पब्लिक इमेज कुल थियो । लकी अलीको कन्सर्टमा दीपकको प्रदर्शन उनका लागि निकै राम्रो सावित भयो । अलीको टिमले उनको सम्मान गर्‍यो । दीपकको अघिपछि नेपाली गीत र संगीतको दुनियाँले धेरै ठूला उपलब्धिहरू हासिल गर्‍यो । हरिष माथेमा, सन्जय श्रेष्ठ, नेपथ्य : दीपकका अगाडि पछाडि प्रेरक वातावरणको कमी थिएन । दीपक लजालु थिए । अहिले त अब उनको त्यो लजालु छवि छैन । उनको गाउँ ग्वार्को अब पाटन सहरको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा भैसकेको छ ।
नेपाली संगीत र बाजाको प्रयोगले नेपाली गीतमा नयाँ फ्युजन ल्याउन लागेका छन् उनी । यसको पछाडि पनि कारण छ । कार्यक्रम देखाउन विदेश जाँदा नेपाली संगीतकारहरूको हातमा गितार र अरू पश्चिमी वाद्ययन्त्र देखेका विदेशीहरू खिस्रिक्क भए । उनीहरू नेपाली बाजा र संगीतमा रमाउन आएका थिए । त्यही घटनाबाट प्रेरित दीपक अहिले नेपाली वाद्ययन्त्रहरूकै प्रयोग गरेर नेपाली गीत–संगीत सिर्जना गर्दैछन् । उनको यस्तो सिर्जना देश र विदेश दुवैतिर लोकप्रिय हुन थालेको छ ।
दीपकको संगीतमा बढी झ्याइँझुइँ हँुदैन । उनी शान्त प्रकृतिका छन् आफैं पनि । त्यसैले पनि उनी अलग्गै काम गर्न रमाएका हुन् । मानिस एक्लोमा सिर्जनाका बादलहरूमा भौंतारिन्छ । परिवर्तनप्रति दीपक अलि बढी संवेदनशील छन् । खासगरेर महिला गायिका तथा संगीतकारको अभाव उनलाई खट्किएको छ । नेपाली समाज आफ्नै सर्किटमा घुम्छ । टाइममा केटीको बिहे हुनैपर्ने, बिहे भएपछि नारीको आवाज नसुनिने, उनीहरूले भनेजस्तो नहुने— यी पचासौं जञ्जालले नारीलाई बन्धनमा बाँधेको छ । उनीहरूले घर–परिवारका लागि जागिर छाडेर घरमा खुम्चिएका अनेक उदाहरण छन् दीपकसँग । नारीहरूले जीवनको स्वतन्त्रता भोग्न पाएकै छैनन् ।
दीपकले धेरै साथीभाइको नाम लिए । गायक, संगीतकार, शब्दकार, तर उनले दुई जनाको नाम लिए : नारायण गोपाल र योगेश्वर अमात्यको । ‘नारायण दाइ त नारायण दाइ नै भयो,’ दीपकले भने, ‘योगेश्वर दाइ विचित्रको छ । ठ्याक्कै रकस्टार । आफ्नै एटिच्युड, स्टायल, डिटरमिनेसन, पहिचान र आफ्नोपन भएको विशिष्ट कलाकार । योगेश्वर दाइका हजारौं दर्शक–श्रोता नै उसको विशिष्टता हो । दर्शकको माझमा कुदिहाल्ने ठूलो गुण छ योगेश्वरमा ।”
योगेश्वरको जस्तो श्रोतासँग जोडिने स्पन्दन दीपकमा पनि त्यति नै छ । श्रोताले थाहै पाउँदैन, उसको हिरो उसैसँग छ ।
प्रकाशित :जेष्ठ १६, २०७५
फाउ पुर्णे, फागु र होली
सिर्जनशील मनहरूको जमघट
सिने उद्योगमा निराजनक साता
किप अन चेन्जिङ्ग केकीको नयाँ मन्त्र फाल्गुन २२, २०७५
‘मुन्द्रे’ खुसी छ ! फाल्गुन ८, २०७५
सन्तलाई कागजको रातो गुलाब माघ २९, २०७५
प्रादेशिक राजधानी हेटौंडा माघ २२, २०७५
पाँच दशकपछि नीर शाह माघ १६, २०७५
करिश्माको दोस्रो इनिङ माघ १०, २०७५
कि यो एउटा खुला चर्पी हो ! पुस २८, २०७५
कफी गुरु अर्जुन चौहान पुस १८, २०७५
मिथिलाका रामदयालजी पुस १३, २०७५